Saturday June 06, 2020 - 19:48:04 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kalfadhigii ay xildhibaanada baarlamaanka dowladda Federaalka ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa kusoo idlaaday buuq iyo fowdo kadib markii xildhibaanadu ay carqaladeeyeen khudbaddii Farmaajo.
Tobanaan xildhibaan oo katirsan baarlamaanka dowladda Federaalka ayaa ku oriyay Max'med Cabdullaahi Farmaajo xilli uu isku dayay in uu jeediyay khudabaddii ugu dambaysay ee ku aaddan arrimaha doorashooyinka.
Xildhibaan Iftiin Xasan Baasto oo kamid ah xildhibaanada sida aadka ah umucaaradsan siyaasadda Farmaajo Kheyre ku dhaqmaan ayaa madaxweynaha ku eedeeyay in uu isticmaalayay hadallo jiha wareerin ah isagoo meel iska dhigay dhibaatooyinka dalka ka jira taas bedelkeedna soo hadal qaaday wax uu ugu yeeray jiha wareerin siyaasadeed.
"Madaxweynuhu wuxuu lasoo shir tagay khudbad jiha wareerin ah marna sooma hadal qaadin dhibaatooyinka dalka kajira wuxuuna ka hadalayay wax aan faa'iido laheyn" sidaas waxaa yiri Iftiin Xasan Baasto.
Xildhibaan Xasan Yare oo kamid ahaa xildhibaannada ku buuqay Farmaajo ayaa sheegay in uu lasoo shir tagay khudbad aan lajaan qaadayn xaaladda ka taagan Soomaaliya islamarkaana uu damacsanyahay muddo kororsi sida uu hadalka u dhigay.
Farmaajo ayaa joojiyay khudbadda 10 daqiiqo kadib markii buuqa iyo sawaxanka uu kusii xoogeystay,arrintan ayaa banaanka soo dhigaysa heerka ay gaarsiisantahay kala qeybsanaanta ka dhaxaysa Golayaasha dolwadda oo sedaxda sano ee ay xilka hayaan ku dhammeystay khilaaf iyo kala argti duwanaashiyo dhanka siyaasadda ah.
'Beesha Caalamka' oo hanjabaad cusub ujeedisay dowladda Farmaajo.
Video: Xasan Cali Kheyre oo ka digay khalalaasa Amni oo ka dhasha Xukun kororsiga uu Farmaajo qorshanayo.
Farmaajo oo aqbalay Xilka qaadistii Kheyre soona magacaabaya R/wasaare cusub.
Maxaa kasoo baxay kulankii Farmaajo iyo hoggaamiyaasha maamullada ku dhaxmaray Dhuusamareeb?